“ताक परे तिवारी नत्र गोतामे”- वास्तबमा यो भन्या के हो ? – Daunne News
“ताक परे तिवारी नत्र गोतामे”- वास्तबमा यो भन्या के हो ?
By Daunne News	 Last updated Aug 30, 2020
नितिरमण गौतम –
बेलाबखत कुराकानी गर्दा वैकल्पिक भावसहितको यौटा वाक्यांश बोलिन्छ । पहाडी मूलका प्रायः सबै जसोबाट बोलिने यो वाक्यांश तपाईंले पनि बोल्नु भएको हुनसक्छ । यो उखान बुझेर बोल्नु भएको छ कि लहैलहैमा बोल्नु भएको होस् तपाईं आफू स्वयम् नै आफूलाई कसी लगाउनुस् ।
वैदिक परम्परामा धेरै ऋषिगणको अस्तित्व रहेका छन । सनातन ग्रन्थमा हामी ८८ हजार ऋषिहरुको पटकपटक चर्चा पाउँदछौं । ८८ हजार ऋषिगण भए पनि शाश्त्रहरुमा मूलरूपमा सप्तऋषिको चर्चा पटकपटक आइ रहन्छ । सप्तऋषि गण बिशेष पूज्य र स्तुत्य रहनुभएको छ । ऋषि पन्चमीमा अरुन्धतीसहित ऋषिहरुको बिशेष अर्चना गर्ने गरिन्छ भने ऋषि तर्पणीमा ऋषिहरुलाई तर्पण दिने सनातन परम्परा रहेको छ । सप्तऋषि समुहमा अत्रि,बशिष्ठ,गौतम,काश्यप,जमदग्नी, विश्वामित्र र भारद्वाजलाई मानिएको छ ।
तर यहाँ न त खिसिट्यूरी छ न त प्रमोद नै । यहाँ तिवारी थरको पनि गोत्र गौतम नै भए पछि उनीहरूलाई थरका हिसाबले तिवारी भनेपनि भयो या गौतम ऋषिका सन्तति भएकोले गौतम भनेपनि भयो भन्ने अर्थमा यसो भनिएको हुनसक्छ । यहाँ अवसरवादीको अर्थमा त भनिएको हैन ? एउटा सन्देह चै उठ्छ नै, या विकल्पको रुपमा पनि भनेको हुन सक्छ । मन्थन गरेर नौनी निकाल्न रहल नै छ ।
गौतमहरुका कुरा गर्दा हामी अत्रि गोत्रीय गौतम हौं । मतलव हामी नेपाली भाषी गौतमहरुको गोत्र अत्रि हो । र हामी अग्निहोत्र ब्राह्मण काशीदाशका वंशजहरु हौं ।
नेपाल, भुटान, बर्मा तथा भारतीय भूखण्डहरुमा स्थान अनुसार थर लेख्दा गौतम, गोतामे, क्षत्री ,केसी, पाध्या, उपाध्याय, शर्मा, छेत्री, खत्री, गिरी, पुरी आदि थर लेख्ने चलन छ । पहिले गोतामे लेखि पछि माथि उल्लेखित थरहरु लेख्ने नेपाली मूल भाषीहरु चाहिँ महर्षि अत्रिका वंशजहरु नै हुन् । मतलब हामीले जेजे लेखेर आफ्नो परिचय दिए पनि हामी बिच वंश निकटता छ ।
उता भारतको कुरा निकालौं त्यहाँ गौतम थर (Title) लेख्ने अनेपाली भाषी सज्जनहरु पनि धेरै पाइन्छन् । भारतमा रहने उनीहरु महर्षि गौतमका सन्तानहरु हुन् । उनीहरु प्रायले पनि गौतम थर (Title) लेख्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूको गोत्र गौतम हो ।
अत्रि गोत्रका सगोत्रहरु : गौतम, कडरिया, खतिवडा, वस्ती, चापागाईं, मिश्र, ठाडाराई अधिकारी, हमाल, समाल, शाही ठकुरी, डोटेल, श्रीमल्ल, पहाडी, जोशी, ओझा, साखी आदि रहेका छन् । हामीले सगोत्रलाई बन्धु बान्धवको रुपमा व्यवहार गर्ने गरेका छौं । र सनातन परम्पराअनुसार सगोत्रका विचमा वैवाहिक नाता जोड्न बर्जित छ भनिएको छ ।
अब यहाँ उठान गरेको बिषय ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ किन भनियो यसमा केन्द्रित रहौं । हामी गौतमहरुलाई गोतामे भन्दा कुनै तात्विक फरक पर्दैन नै । यहाँ उल्लेख गरिएका तिवारीहरु सप्तऋषि मध्ये महर्षि गौतमका सन्ततिहरु हुन । अर्थात् तिवारीहरुको गोत्र ‘गौतम’ हो ।
वास्तवमा गोत्रबाट हाम्रो पहिचान स्थापना गरिएको भए पनि हुने थियो । सुरुमा त गोत्रबाट मात्रै पहिचान हुने गर्दथ्यो । तर पछि समयान्तरमा बसोबास, अध्ययन, पदवी, जागिर, पेशा, विर्ता तथा विभिन्न घटनाक्रम आदिका कारणले विभिन्न थरहरु कायम हुदै गए । गौतम गोत्रका सगोत्रहरु तिवारी, सन्ज्याल, त्रिपाठी आदि रहेको पाइयो ।
नेपाली जनजिब्रोले व्यवहारिक शब्द र थरहरु उनेर धेरै टुक्काहरु बनाएका छन् । उखान टुक्का यात श्रृङ्गार अथवा हाँस्य रसमा आमोदका लागि बनाइएका छन् यात कसैको खिसिट्यूरी गर्नका लागि बनाइएको पाइन्छ ।
गोतामकोटबाट पल्लवित भएका हामी अत्रि गोत्रीय गौतमहरुलाई पहिले गोतामे नै भनिन्थ्यो । अझै पनि गोतामे लेख्नेको संख्या निकै पाइन्छ । तिवारीको गोत्र गौतम हो । धेरै जसो गाउँमा गौतमहरु अधिक नै थिए, प्रायः जसो सबै गौतमलाई त्यसताका जनबोलीमा गोतामे नै भन्ने चलन थियो । गाँठी कुरा नबुझी गौतम गोत्रलाई पनि गोतामे भनिएको हुनसक्छ । या भनाइमा सरलताका लागि गोतामे भनिएको पनि हुनसक्छ । कतै कतै एकलखे लगाएर बोलाउँदा होच्याइएको अर्थमा पनि लिइन्छ । हाम्रो थर गोतामेबाट गौतम हुनुमा धेरै लामो र रोचक इतिहास कथा छ । तेस प्रसङ्गलाई अलग्गै धेरै ठाउँमा चर्चा गरिएको छ ।
सारमा ‘तिवारी’ भन्नू र ‘गौतम’ भन्नू एकै भएको बुझियो । कुनैबेला तिवारी भनिने र कुनैबेला गौतम भनिने भएकोले पारखी पुर्खाहरुले यो टुक्का बनाएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । तपाईं पाठक सज्जनहरुलाई मनमा लागेको कुरा छताछुल्ल पारीदिनु भए म ङिच्च हाँस्न र यस लेखलाई पूर्ण बनाउन पाउने थिएँ ।